ummeleli ngamunye wobulili fair, manje noma ngokuhamba kwesikhathi baqala bacabanga ngokubukeka kwabo. Futhi lapho umbuzo imayelana ukuthatha ukuzinakekela, sihlala sizama ukuba ukhethe imikhiqizo yezimonyo nge okuqukethwe ubuncane izinto ikakhulukazi ithuthukiswe, ukuthi noma ukhilimu ukuze izingalo noma izimali yokugezela, ukuwasha izimpushana noma uketshezi ukuhlanza indlu. Kuyinto imfashini futhi ohlonishwa ukusebenzisa amalungiselelo zemvelo kuphela. Futhi nakakhulu lapho sikhetha into izingane zabo. Kusukela sihloko, uzofunda ngobani Oles Mustaeva. Workshop (abathengi njalo Izibuyekezo positive) ke ngesikhathi esifushane iye yatha- ngenxa izinga imikhiqizo. Futhi manje asonge izandla uphumule, funda!
Izindleko zemvelo izimonyo "Workshop Olesi Mustaevoy": izinga Tested
Ngakho njengoba yemvelo ezweni lethu technogenic baningi kakhulu, zonke izinkampani ezikhiqiza izimonyo, landela izitayela fashion. Yiqiniso, izindleko naturproduktov oda ezidlula ephakeme kunaleyo okhilimu, si, amashampu nezinye izingoma nge zokwenziwa izithako. Noma kunjalo, isidingo akuyona falling. Ngoba sonke siyazi: ikhwalithi ephezulu kufanele ukhokhe.
Izingxenye izimonyo, nezivimbelakuvunda yemvelo
amafutha wemvelo, sicashunwa izitshalo ezihlukahlukene abe izingxenye esebenzayo sika Skin busetshenziswa for umzimba, ubuso, izinwele. Ukuze babahlukanisa ezitshalweni, izazi zesayensi ziye zasungula kumakhemikhali awuketshezi ekhethekile organic. Asiza ukugqamisa akhiphe oyifunayo, baligcine isibalo esiphezulu izingxenye eziwusizo. Le nqubo lide futhi kukhathaza. Njengazo zonke zemvelo, izimonyo ezinjalo kungagcineki isikhathi eside. Kodwa lapha, ososayensi bethu bathole nendlela yokuphuma: ezinye izinto ezikhishwe isitshalo angase ukukhonza njengomdala uyakulondoloza kakhulu, ngoba ngisho nomoya kungaba yenethiwekhi kwamagciwane, kusukela lapho izimonyo kuthiwa eziwohlokayo.
Ukungeza ezivamile vitamin E ukhilimu bandisa inkonzo umkhiqizo yezimonyo futhi i antioxidant esihle kakhulu isikhumba sakho. I izimonyo ezishibhile mass emakethe usebenzise Analogue zokwenziwa of vitamin E, okuthiwa tocopherol acetate noma i-alpha-tocopherol. Yiqiniso, ngokungafani kuya Analogue zemvelo, zokwenziwa lutho ezinhle ngeke ngilethe le isikhumba. Kodwa Vitamin zemvelo kuzovikela ukuguga isikhumba sakho ngokususa radicals khulula. Kuyinto uvithamini wangempela kwentsha.
Lemon futhi omuhle kakhulu uyakulondoloza zemvelo. Hhayi ezisawolintshi, yebo, futhi acid ayo. Ngaphandle kweqiniso lokuthi kwabathile kungenalo spoilage futhi elibi imikhiqizo, izimonyo, isetshenziswa njenge-ejenti defoaming, a diluent kanye lwewashi pH. Yiqiniso lokhu akubona bonke nezivimbelakuvunda zemvelo. Wonke umuntu ejwayelene usawoti, uju, apula cider uviniga, nabanye abaningi. Ngokuvamile, kukhona inala ongakhetha kuzo.
imikhiqizo yemvelo - kukhethwa wonke umuntu
Ukuze ngokwabo futhi abathandekayo babo, sizama ukukhetha imikhiqizo yemvelo kuphela, kanye nemikhiqizo kwenhlanzeko. I enhle isixazululo - utshani obomile, ukuthenga uju, neminye imikhiqizo, futhi enze konke ekhaya. Phela, uma omunye ungaqiniseka ngokuphelele ukuthi kuphela isebenzisa izinto zemvelo eluhlaza. Futhi ezimweni lapho kungekho isikhathi ukuzifinyelela ngokucophelela ekukhiqizeni okufanayo ubuso ukhilimu, ungalethemba kanye nezifundiswa, kodwa kuphela uma uqinisekile njengoba impahla eluhlaza. Phela, ungakwazi bonakalise ukhilimu noma khuhla kokunezela kulo okungenani umkhiqizo owodwa okungabazisayo, ngisho noma ngabe i amafutha abalulekile, noma amavithamini.
Ikhwalithi ephezulu - baningi
"Workshop Olesi Mustaevoy" silwenza unakekela izimonyo ababukeli. Ithimba lisebenza ngenkuthalo lapho kuvezwa ngomkhiqizo ngamunye ukuze ungakwazi ukujabulela konke athokoza ukunakekelwa kwemvelo. Fine uwoyela amly, okuyinto kabanzi kakhulu asetshenziswe ekukhiqizeni izimonyo kanye argan. amanzi Floral indawo tonics futhi humectants. Amashampu futhi isimo imikhiqizo izinwele ukunakekelwa for ebusweni nasemzimbeni, izimonyo - "Olesi Mustaevoy Workshop" kuyinto uhla omkhulu, wena kuyoba inala ongakhetha kuzo.
I lolwehlukanisa "Workshop": wonke phama iziqukathi opaque, futhi lokhu akukho ngozi. emaphaketheni okunjalo kusukela isinyathelo singakutholi ukukhanya kwelanga. Ngokwesibonelo, amanzi ezimibalabala kumele agcinwe endaweni ingilazi amnyama! Kodwa zikhona izinkampani abonakele ukuthengisa ithuluzi elikahle ku plastic evamile. Hydrolat, noma amanzi ezimibalabala, - ovela eceleni ukwenziwa amafutha abalulekile etholwe ziphuzo zazihluzwa. Nazi nje eceleni asikwazi ngokuthi! Lona amanzi azigcina zonke izakhiwo ezuzisayo zezitshalo. namuhla ethandwa kakhulu Hydrolat roses lavender. Nakuba, njengoba kovorilos ngaphambi, ngokwemvelo - kuba ophambili "Workshop Olesi Mustaevoy" hhayi emva udumo ezishibhile. Ngokuphambene nalokho, benza konke ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo babe ezingabizi futhi ugcine izinga okusezingeni eliphezulu. Futhi iqembu Olesya kubalulekile ukukhiqiza hhayi kuphela ewusizo futhi ephephile umzimba, kodwa musa balimaza imikhiqizo imvelo.
Abesifazane abasebenzisa izimonyo ngithengiswe ngaphansi idatha umkhiqizo, izinguquko ukubukeka and self-bezibona ngokushesha okukhulu. Nokho, "Workshop Olesi Mustaevoy", ukubuyekezwa imikhiqizo engama sokufanele kuphela, kodwa futhi egcwele wokwenama, ulwela umthengi kuphela izindlela kuvunyelwe. Kuyamangalisa ngempela Izingxube abakhathalelayo okulungiselelwe ngothando obakhathalelayo amaklayenti ngamunye, ukusekela ubuhle ezimangalisayo zemvelo. Enye yemikhiqizo phezulu - ". Wax izinwele iphela" zokuvimbela ephawulekayo yokuhlukanisa curls. Ngokuphelele smoothes imicu, uyazondla, yenza kube lula Stow, ngengcina yezinyosi futhi amafutha okunomsoco yisisekelo ithuluzi ezimangalisayo. A Scrubs umzimba "Chocolate Ushukela" futhi "Chocolate-ikhofi", ngaphezu iphunga enchanting, unekhono bushelelezi kwesikhumba ngenkathi okunomsoco ukuyishiya bushelelezi futhi soft.
"Workshop Olesi Mustaevoy" ngu-100% lapho zibhekene nomsebenzi. Ukuze wenze izindawo kufinyeleleke kalula, inkampani ngokuvamile lucwaningo izenzo okuhloswe ngaso ekwandiseni izilaleli umthengi. Ngakho, njalo kudlalwa kwi website esemthethweni "Workshop Olesi Mustaevoy" isigqebhezana. On ke ungathola isaphulelo imikhiqizo elisha sha Russian. Futhi ukuqinisekisa ukuthi zonke ntombazane kungenzeka ukhetha abathandwa izindlela.
Ukukhetha kuphela ngawe
Ngesikhashana nje ngakwazi ukwenza imikhiqizo yayo eliphezulu ethandwa Oles Mustaeva. "Workshop" (ngokuthi kusho Izibuyekezo emangalisayo) igcina ijubane nalezi zikhathi futhi uphendule zonke izimfuno abathengi. Yiba amahle nge izimonyo zemvelo!